गर्मी मौसममा अनुहार चाउरी पर्ने खतरा, यसरी गर्नुहोस् हेरबिचार » खबरहरुको एउटै केन्द्र
गर्मी मौसममा अनुहार चाउरी पर्ने खतरा, यसरी गर्नुहोस् हेरबिचार
सोमबार, बैशाख ३१, २०७५ १३:३७ मा प्रकाशित !
एजेन्सी -गर्मी मौसममा धेरैलाई घरबाट बाहिर निस्कन नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने नै लाग्छ किनभने घामले तपाईंको रंग, निखार तपाईंबाट खोस्छ र यसलाई कालो, रुखो बनाइदिन्छ । फलस्वरुपः बिस्तारै अनुहारको छाला चाउरी पर्न थाल्छ । त्यसकारण गर्मी मौसममा आफ्नो छालाको रामो स्याहार गर्नुपर्छ ।
अमिलो फलफूल र पानीको सेवनः
अमिलो फलफूलजस्तै सुन्तला, कागती र अंगुरजस्ता फलको अत्यधिक सेवन गर्दा यसबाट पर्याप्त मात्रामा भिटामिन सी पाउन सकिन्छ । भिटामिन सी कोलाजन र छालाका लागि अन्य प्रोटिन बनाउन सहायक हुन्छ । यसले तपाईंलाई चाउरीबाट बचाउन सक्छ । चाउरीपनाको सफल उपचारका लागि अत्यधिक पानी पिउन आवश्यक छ । दिनमा कम्तीमा पनि १२ –१३ गिलास पानी पिउनुहोस् ।
चाउरीपनाबाट बच्नका लागि अण्डाको सेतो भाग निकै फाइदाजनक मानिन्छ । अण्डाको सेतो भागलाई कचौरामा फिटेर फेसप्याक जसरी लगाउँदा चाउरी हट्छ ।
गर्मी मौसममा चिपचिप नहुने वा वाटर प्रुप मेकअपको प्रयोग गर्नुहोस् । गर्मी मौसममा फ्रेश देखिन दिनमा थुप्रै पटक अनुहारमा चिसो पानीले छर्कनुहोस् ।
छालालाई चिसो बनाउन फेसप्याकः
अनुहारलाई चाउरीबाट बचाउनका लागि गर्मी महिनामा चन्दनको प्याक लगाउनुहोस् । यसले अनुहारलाई चिसो बनाउँछ । गुलाबजललाई बरफमा जमाएर ती क्यूब्सले चाउरी परेको ठाउँमा मोल्नुहोस् । यसो गर्दा चाउरीलाई हटाउन सहयोग गर्दछ ।
काँक्रोलाई स–सानो टुक्रामा काटेर त्यसलाई आँखा वरिपरि र चाउरी परेको भागमा मोल्नुहोस् । मुल्तानी माटोलाई गुलाब जल राखेर अनुहारमा लगाउनुहोस् । यसो गर्दा छालाबाट टक्सिन बाहिर निस्कन्छ र चाउरीपना पनि कम हुन्छ ।
भिटामिन इ क्याप्सुलः
यसले चाउरीपनालाई टाढा राख्न सहयोग गर्दछ । तीनवटा भिटामिन इ क्याप्सुललाई एउटा कचौरामा हाल्नुहोस् र त्यसमा दुई चम्चाख दही, आधा चम्चा मह र आधा चम्चा कागतीको रस मिसाउनुहोस् । राम्रोसँग फिटेर यो प्याकलाई अनुहारमा लगाउनुहोस् र १० मिनेटसम्म छोड्नुहोस् । त्यसपछि फेसलाई हल्का मसाज गरेर पानीले धुनुहोस् ।
गर्मी मौसममा सकेसम्म कम बाहिर निस्कनुहोस् । बाहिर निस्कनै परे चस्मा र टाउको ढाकेर निस्कुहोस् । साथै छाताको छाता पनि ओढ्नुहोस् । अनुहारमा चाउरी पर्न नदिन सनस्क्रिन लगाएर मात्र बाहिर निस्कनुहोस् । गर्मीबाट तातेर घरमा आएलगत्तै मुख नधुनुहोस् । एकछिन बसेर मुख धोएपछि मोइस्चुराइजिङ क्रिम लगाउनुहोस् । दैनिक सुत्नु अघि चाउरी परेको ठाउँमा नरिवलको तेलले मसाज गर्नुहोस् । यसो गर्दा चाउरी कम हुन्छ ।
PREVIOUS POST Previous post: भारतीय माओवादी प्रभावित छत्तीसगढमा सुरक्षाकर्मीले किन गरिरहेका छन् आत्महत्या ?
NEXT POST Next post: मोदीको भ्रमण तामझामले महालम्पसारवादी देखियो भन्दै प्रधानमन्त्री माथि संसदमा यसरी खनिए गगन थापा,
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, बैशाख ३१, २०७५ १३:३७
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, बैशाख ३१, २०७५ १३:३७
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, बैशाख ३१, २०७५ १३:३७
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, बैशाख ३१, २०७५ १३:३७
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, बैशाख ३१, २०७५ १३:३७